Florida Data Recovery Services | LC Technology | data Recovery
Home → Florida Data Recovery Services
LC Technology awade data mgbake ọrụ niile ụdị Digital Media, plus ike mbanye mgbake. Dị ka otu n'ime United States’ kasị flash ebe nchekwa data mgbake ọrụ ụlọ ọrụ, LC Technology-enye a pụrụ iche maka onye ọ bụla si novice na ọkachamara. Anyị Florida data mgbake ọrụ nwere ike naghachi ọ bụla na niile ụdị data. Ị mmadụ na mberede ehichapụ data files, oyiyi, videos ma ọ bụ ọdịyo faịlụ site na gị media, Ị ma ọ bụ wetara ndị media n'oge a dee usoro? Anyị data mgbake ọrụ nwere ike naghachi gị faịlụ na-esi na gị data azụ.
Anyị Florida data mgbake ọrụ labs nọ ná nchebe gburugburu na niile ahịa data nọ onwe. Achịkwa laabu ohere pụtara naanị kwesịrị ekwesị ọkachamara aka mwute ozi. Anyị na-ahụ mgbe nile butere okûnam nkewa data maka ọchịchị, mmanye iwu ụlọ ọrụ na nzuzo na òtù. LC Technology na-agba nkịtị na-na ọkwa nke nzuzo na nchebe na nkewa ihe achọ. All natara akwụkwọ na-na-adịgide adịgide kpochapụrụ mgbe 30 ụbọchị.
Tupu eziga gị media mgbake, biko na-akpọ na-ekwu okwu na otu nke anyị na-anọchite anya:
• Toll-Free na US: 1-866-603-2195
• Ná mpụga US: 1-727-449-0891
• Ke Europe, Call: +44 (0)115 704 3306
Anyị ewepụghị-ego price maka flash media data mgbake ọrụ na-agụnye mgbake gị data ka a CD ma ọ bụ DVD (ma ọ bụ na a USB mbanye maka dị nnọọ ntakịrị ihe) ma laghachi mbupu. N'ihi recoveries na mpụga nke US, ihe ọzọ mbupu ego na-kwukwara. Ọ dịghị ụgwọ ndị ọzọ karịa nloghachi mbupu ma ọ bụrụ na anyị anaghị ahụ gị faịlụ!
Recovery Service maka Digital Media ruo 2GB – $125
Nra maka ahụ mebiri emebi media (i.e.. njikọ agbajikwa apụ, etc) – $100
Recovery Service maka Digital Media 4GB – $150
Recovery Service maka Digital Media 8GB – $175
Recovery Service maka Digital Media 16GB – $225
Recovery Service maka Digital Media 32GB – $275
Recovery Service maka Digital Media 64GB – $325
Recovery Service maka Digital Media 128GB – $375
Recovery Service maka Digital Media 256GB na n'elu – $425
Recovery Service maka Digital Media 512GB na n'elu – $475
Recovery Service maka Digital Media 1TB na n'elu – $525
Zipu dechara Recovery Ụdị na media na n'okpuru okwu.
LC Technology awade data mgbake ọrụ niile ụdị SanDisk® digital media. Nke a bụ ọrụ maka niile SanDisk® digital media na a ọnụego ewepụghị dabeere na nchekwa ikike nke media. Anyị ewepụghị-ego price maka flash media mgbake agụnye mgbake gị data ka a CD ma ọ bụ DVD (ma ọ bụ na a USB mbanye maka dị nnọọ ntakịrị ihe) ma laghachi mbupu. N'ihi recoveries na mpụga nke US, ihe ọzọ mbupu ego na-kwukwara. Ọ dịghị ụgwọ ndị ọzọ karịa nloghachi mbupu ma ọ bụrụ na anyị anaghị ahụ gị faịlụ!
SanDisk® Digital Media Recovery ruo 2GB – $125
SanDisk® Digital Media Recovery 256GB na n'elu – $425
SanDisk® Digital Media Recovery 512GB na n'elu – $475
SanDisk® Digital Media Recovery 1TB na n'elu – $525
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere anyị digital media mgbake ọrụ, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 ma ọ bụ (727) 449-0891 n'èzí US na-ekwu okwu na a ahịa nnọchiteanya. Europe na Australia ọbịa biko gaa na LC Tech UK mgbake ọrụ.
Biko ụgbọ mmiri gị media-esonụ na adreesị (ozi a na-depụtara na mgbake ụdị):
Jide n'aka na ị ngwugwu gị mgbasa ozi na a sturdy mailer, akara dị na ya dị Electronic Media – adigh ekpughe na magnetik n'ubi. mgbe, ezite ya site USPS, gbasie, FedEx, Airborne ma ọ bụ ọ bụla mbupu usoro na-enye ohere ngwugwu ka esoro. Biko mara na kaadị bụ ala na adreesị bụ ziri ezi. LC Technology International, Inc. bụ bụghị maka kaadị na-efu ma ọ bụ mebiri emebi na mbupu.
LC Technology awade ike mbanye data mgbake ọrụ maka ndị ugboro ebe mgbake dị mkpa karịrị ike ọgwụgwụ ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi forensic mgbake, data mgbake ma ọ bụ mmebi nke siri ike mbanye. Udu dabeere na a ewepụghị ego analysis nke mbanye na ego nke oge nọrọ na mgbake.
N'ihi na nkenke ọdịdị nke ike draịva na dị iche iche ụdị nke okwu a na-okosobode, mgbake ịnye ọnụahịa ga ịdị iche dabere na ụdị mmebi n'oge mbụ anyị nwale. Ọzọ ebubo maka wakporo arrays na ike draịva na e meghere.
ezi uche / Njikwa System Mebiri: Dị ka ala dị $750
Physical / akụrụngwa Mebiri: Dị ka ala dị $1500
IHE: E nwere onye na-abụghị refundable ewepụghị ego price of $100 kwa mbanye maka nwale nke mbanye mgbake. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-aga n'ihu na mgbake, na ego na-etinyere na mgbake na-eri.
Mmalite nkwado bụ mfe – -esi na gị data azụ!
Download anyị ike mbanye mbupu ụdị, jupụta ya, banye ya, na-agụnye na gị mbanye mgbe ị na ụgbọ mmiri ya ka anyị.
Pịa ebe a iji ibudata ike mbanye mbupu ụdị
Ngwugwu mbanye nlezianya zere mbupu mebiri na ụgbọ mmiri anyị e depụtara n'elu.
Ngwugwu mbanye dị na emeputa nkwanye maka mbupu ike draịva. Kaa ngwugwu ka nwere Electronic Media – adigh ekpughe na magnetik n'ubi. Send ya site USPS, gbasie, FedEx, Airborne ma ọ bụ ọ bụla mbupu usoro na-enye ohere ngwugwu ka esoro. Biko amụma mkpuchi mbanye na abụọ elele na-agwa okwu. LC Technology International, Inc. bụ bụghị maka nchịkọta na-efu ma ọ bụ mebiri emebi na mbupu.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ maka nwale ego tupu site kaadị, biko pịa na tinye na ụgbọ ibu button n'okpuru:
Draịvụ Recovery Service Evaluation ego – $100
Ụfọdụ usoro na ọnọdụ itinye.
If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 ma ọ bụ (727) 449-0891 n'èzí U.S. na-ekwu okwu na a ahịa nnọchiteanya. Europe na Australia ọbịa biko gaa na LC Tech UK mgbake ọrụ.